Bridgefy အပ်သည်မည်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း? | Bridgefy
Bridgefy Offline Messaging အပ်ပလီကေးရှင်းသည် အန်တာနက် မရရှိချိန်တွင်တောင် အခြား Bridgefy အသုံးပြုသူများနှင့် စာပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? Bridgefy အပ် က ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တာပါလဲ? Bridgefy ဆိုတာ ဘာလဲ?
Bridgefy ဆိုတာ မတ်ဆေ့ ပို့သော အပ်ပလီကေးရှင်း ဖြစ်သလို SDK တစ်မျိုးလဲဖြစ်ပါတယ်။ မတ်ဆေ့ပို့တာကတော့ အခြား အပ်ပလီကေးရှင်းများလိုပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အဓိက ကွာခြားချက်ကတော့ Bridgefy သည် အင်တာနက် မရှိချိန်တွင်တောင် ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်တာပါဘဲ။ ၀ိုင်ဖိုင် မရှိချိန် တာတို့ အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းမရှိချိန်တို့ ဒေတာမရှိချိန်တို့မှာ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
ဒီ Bridgefy offline messaging အပ် သည် Brdigefy SDK လို့ခေါ်တဲ့ Proprietary ဆော့ဝှဲကို အသုံးပြုပြီး ၁၀၀ မီတာ သို့မဟုတ် ပေ ၃၀၀ အတွင်းမှာရှိတဲ့ အခြား စမတ်ဖုန်းတွေ Bluetooth ကို အသုံးပြုပြီး အောက်ပါအတိုင်း ချိတ်ဆက်ပါတယ်။
Android နဲ့ iPhone Bridgefy အသုံးပြုသူအားလုံးသည် Mesh Network ကို အတူတစ်ကွ တည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သင်၏ မတ်ဆေ့သည် ဆဲဖုန်း တစ်လုံးနှင့် တစ်လုံးမှ တစ်ဆင့်ခြင်း သွားက နေရာအ‌ဝေးကြီးကို ပို့နိုင်မှာပါ။ အောက်ပါ အတိုင်းပါ။
သင်နှင့် သင် မတ်ဆေ့ ပို့လိုက်သူ နှစ်ဦးကြားမှ လူများအားလုံးက သင်တို့ပို့နေသောစာများကို မမြင်ရပါ။ သူတို့ကလဲ ဘာမှာလုပ်စရာမလိုအပ်ပါ။ သူတို့ကိုလဲ သင့် Contact ထဲတွင် ထည့်ထားစရာလည်း မလိုပါ။ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှ စတင်၍ စကားပြောနေသူနှစ်ဦးကြားမှ မတ်ဆေ့များသည် Encrypted လုပ်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကဲ အခု Mesh Network ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပြီဆိုတော့ Bridgefy အပ်ပလီကေးရှင်း ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ ကြည့်ရအောင်။
ဒီ မတ်ဆေ့တွေက Encrypted လုပ်ထားပြီး Broadcast Tab ကနေ ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်တာများအားလုံးကို အနီးနားမှာ ရှိသော Bridgefy အသုံးပြုသူများအားလုံးက မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Bridgfy အပ်ပလီကေးရှင်း က ဘာတွေ ကောင်းတာလဲ?
Bridgefy ရဲ့ Proprietary ဆော့ဝှဲ အနောက်မှာ မျက်လှည့်လေးတစ်ခုပါပါတယ်။ သူက အင်တာနက်မလိုဘဲ Bluetooth နဲ့ ဝိုင်ဖိုက် အင်တာနာကို အသုံးပြုပြီး Mesh Networks ကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဆော့ဝှဲ ဖြစ်တာကြောင့် Developers တွေက အခြား အပ်တွေထဲမှာလဲ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး အင်တာနက်မရလဲ အသုံးပြုနိုင်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။